I-GTranslate: I-plugin elula ye-WordPress Translation Esebenzisa i-Google Translate | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 2, 2020 NgoLwesine, ngoMashi 18, 2021 Douglas Karr
Esikhathini esedlule, benginqikaza ukusebenzisa indlela ye- ukuhumusha ngomshini yesayithi lami. Ngingathanda ukuba nabahumushi emhlabeni wonke bazosiza ekuhumusheni isiza sami sezethameli ezahlukahlukene, kepha ayikho indlela engingaziphindisela ngayo lezo zindleko.
Lokho kusho, ngiyabona ukuthi okuqukethwe yisiza sami kwabelwana ngakho emhlabeni wonke - futhi abantu abaningi basebenzisa ukuhumusha nge-Google ukufunda okuqukethwe kwami ​​ngolimi lwabo lwendabuko. Lokho kungenza ngibe nethemba lokuthi ukuhumusha kungaba kuhle ngokwanele manje njengoba iGoogle iqhubeka nokuthuthuka isebenzisa ukufunda ngomshini nobuhlakani bokufakelwa.
Ngalokho engqondweni, bengifuna ukufaka i-plugin enikeza ukuhumusha kusetshenziswa i-Google Translate, kepha bengifuna okuthile okuphelele kunokudonsela phansi okuhumushe isayithi. Ngifuna izinjini zokusesha zibone futhi zikhombe okuqukethwe kwami ​​emhlabeni jikelele okudinga izici ezimbalwa:
Metadata - lapho izinjini zokusesha zikhasa isiza sami, ngifuna i- hreflang amathegi kusihloko sami ukuhlinzeka izinjini zokusesha ngezindlela ezahlukahlukene ze-URL zolimi ngalunye.
I-URL - ngaphakathi kweWordPress, ngifuna ama-permalinks afake ulimi lokuhumusha endleleni.
Ithemba lami, yiqiniso, ukuthi lokho kuzovula isiza sami sifinyelele izethameli ezibanzi kakhulu futhi kunembuyiselo enhle ekutshalweni kwemali njengoba ngikwazi ukukhulisa imali engikanye nayo kanye neyokukhangisa - ngaphandle kokudinga umzamo wokuhumusha ngesandla.
I-plugin ye-GTranslate WordPress
I-plugin ye-GTranslate nensizakalo ehambisana nayo ifaka zonke lezi zinto kanye nezinye izinketho eziningi:
Dashboard - Ideshibhodi ebanzi yenkonzo yokumisa nokubika.
Ukuhumusha Komshini - Ukuhumusha okuzenzakalelayo kwe-Google ne-Bing.
Inkomba Yezinjini Zokucinga - Izinjini zokucinga zizokhomba amakhasi akho ahumushiwe. Abantu bazokwazi ukuthola umkhiqizo owuthengisayo ngokusesha ngolimi lwabo lwendabuko.
Ama-URL anobungani benjini yokusesha - I-URL ehlukile noma isizinda solimi ngalunye. Ngokwesibonelo: https://fr.martech.zone/.
Ukuhumusha kwe-URL - Ama-URL ewebhusayithi yakho angahunyushwa okubaluleke kakhulu kwi-SEO yezilimi eziningi. Uzokwazi ukuguqula ama-URL ahumushiwe. Ungasebenzisa ipulatifomu ye-GTranslate ukukhomba i-URL ehunyushiwe.
Ukuhlela Ukuhumusha - Hlela ukuhumusha ngesandla ngesihleli se-inline se-GTranslate ngqo kusuka kokuqukethwe. Lokhu kuyadingeka kwezinye izinto… ngokwesibonelo, angifuni igama lenkampani yami, Highbridge, kuhunyushwe.
Ukuhlela Emugqeni - Ungasebenzisa futhi i-syntax ngaphakathi kwendatshana yakho ukufaka izixhumanisi noma izithombe esikhundleni solimi.
I-syntax iyafana nesithombe:
Futhi uma ungafuni isigaba esiguqulelwe, ungavele ungeze isigaba se- inguqulo.
Izibalo Zokusebenzisa - Ungabona ithrafikhi yakho yokuhumusha nenombolo yokuhumusha kudeshibhodi yakho.
Ama-subdomains - Ungakhetha ukuba nesizinda solimi lwakho ngalunye. Ngikhethe le ndlela kunendlela ye-URL ngoba ibikhokha intela encane kwi-webserver yami. Indlela yesizinda ishesha ngendlela emangalisayo futhi imane ikhomba ngqo ekhasini eligcinwe kunqolobane, elihunyushiwe leGtranslate.
Domain - Ungaba nesizinda esihlukile solimi ngalunye. Isibonelo, uma kusetshenziswa isizinda sezinga eliphezulu le-.tld), isiza sakho singabekwa ngaphezulu kwimiphumela yezinjini zokusesha eFrance.
Abahlanganyeli - Uma ungathanda abantu abazosiza ngokuhumusha ngesandla, bangakwazi ukufinyelela kwi-GTranslate bese bengeza ukuhlela okwenziwa ngesandla.
Hlela Umlando - Buka futhi uhlele umlando wakho wokuhlelwa okwenziwa ngesandla.
Ukuvuselelwa Okungenamthungo - Akunasidingo sokuhlola izibuyekezo zesoftware bese uzifaka. Siyazikhathalela ngezibuyekezo ezengeziwe. Ujabulela nje insizakalo esesikhathini nsuku zonke
Izilimi - Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English , Esperanto, Estonia, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, German, Greek, Gujarati, Haitian, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Japanese, Javanese , IsiKannada, isiKazakh, isiKhmer, isiKorea, isiKurdish, isiKyrgyz, isiLao, isiLatin, isiLatvia, isiLithuania, isiLuxish, isiMacedonia, isiMalagasy, isiMalayalam, isiMalay, isiMaltese, isiMaori, isiMarathi, isiMongolia, isiMyanmar (isiBurma), isiNepali, isiNorway, isiPashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Shona, Sesotho, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Samoan, Scots Gaelic, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Turkish. , Isi-Ukraine, isi-Urdu, isi-Uzbek, isiVietnam, isi-Welsh, isiXhosa, isiYiddish, isiYoruba, isiZulu
Bhalisela i-GTranslate 15-Trial Day
Uma usebenzisa indlela ye-URL ye-GTranslate, ngeke ungene kunoma yiziphi izingqinamba ngokulandelela ithrafikhi yakho ehunyushiwe. Kodwa-ke, uma usebenza kusuka kuma-subdomains, uzodinga ukumisa kahle i-Google Analytics (kanye ne-Google Tag Manager uma uyisebenzisa) ukuthwebula lelo thrafikhi. Kukhona ifayela le- i-athikili enhle echaza lokhu kusetha ngakho-ke angizukuyiphinda lapha.
Ngaphakathi kwe-Google Analytics, uma ufisa ukuhlukanisa ama-analytics akho ngolimi, ungavele engeza igama lomethuleli njengobukhulu besibili ukuhlunga ithrafikhi yakho nge-subdomain.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-GTranslate.
Tags: ukuhumusha kwe-bingukuhumusha nge-Googlei- hreflangukuhumusha ngomshiniukuhumushaWordPressplugin wordpressukuhumusha kwe-wordpressi-plugin yokuhumusha kwe-wordpress